Imbeko 8A: Ukucaciswa, ixabiso kunye nokwaziswa ngokusesikweni | I-Androidsis
Imbeko 8A: Inqanaba elitsha lomnxeba lokungena
Imbeko isishiyile nee-smartphones ezininzi kwiiveki ezidlulileyo. Uninzi lwazo kuluhlu lwazo lokufaka, njenge-Honor 8S. Ikhampani ngoku ibeka i-Honor 8A ngokusemthethweni. Yifowuni entsha ye-smartphone ngaphakathi kweli candelo kuluhlu olusezantsi lomgangatho. Icandelo apho uphawu luqala khona iimodeli ezininzi.
Le Honor 8A yimodeli elula kune Pro 8A, esele siyazi kwiiveki ezimbalwa ezidlulileyo. Nangona njengesiqhelo kwinkampani, ishiya ineemvakalelo ezilungileyo ze-smartphone engaphakathi kweli candelo. Yintoni esinokuyilindela kule fowuni? Sikuxelela yonke into engezantsi.
Kuyilo asifumani mangalisa kakhulu kule meko. Uphawu lwesiTshayina lusebenzisa Isikrini esine-notch ekubunjweni kwethontsi lamanzi. Nangona esinye sezimanga sifumaneka ngasemva. Kuba isixhobo sisebenzisa inzwa yeminwe. Into enqabileyo kolu luhlu.
Imbeko umhla we-20 wokuboniswa utyhiliwe
1 Imbeko 8A Ukucaciswa
Imbeko 8A Ukucaciswa
Uphawu lwaseTshayina lusishiya nefowuni enexabiso elifanelekileyo lemali, njengesiqhelo kwimeko yakho. Inketho elungileyo yokujonga ngaphakathi kuluhlu lokungena lwe-Android. Uhlobo luhlaziya olu luhlu lweefowuni ngolunye uphuculo. Ukongeza, bongeza kumkhombandlela weescreen ze-6-intshi. Le yinkcazo epheleleyo yeHonor 8A:
Iscreen: I-intshi ye-IPS ye-6 intshi ene-1.560 x 720 isisombululo
Inkqubo: MediaTek Helio P35
I-RAM: 2/3 GB
Ukugcinwa kwangaphakathi: 32/64 GB
Ikhamera yangaphambili: 8 MP nge f / 2.0 ukuvula
Ikhamera esemva: 13 MP nge f / 1.8 ukuvula
Ibhetri: 3020 mAh
Inkqubo yokusebenza: I-Android 9 Pie ene-EMUI 9.0 njengobume bokwenza ngokwezifiso
Ukunxibelelana: LTE, iWi-Fi 5GHz: 802.11 a / n / ac, iBluetooth 4.2, iMicro USB, i-minijack, iRadiyo ye-FM
Abanye: Umva wokufunda ngomnwe, ukubonwa kobuso
Imilinganiselo: 156,28 x 73,5 x 8 mm
Ubunzima: 150 gram
Ngaphandle kwamathandabuzo, sinokubona izinto ezithile zixhaphakileyo kwisiphelo esisezantsi se-Android. Kodwa kufanele kuqatshelwe ukuba uphawu lwaseTshayina lubonisa iinkcukacha ezithile ezinqabileyo. Kwisandle esinye, sineenguqulelo ezimbini zale Honor 8A ngokwe-RAM kunye nokugcinwa. Into engafane yenzeke kweli candelo lentengiso. Ukongeza, ifowuni iza zombini inzwa yeminwe kunye nokwaziwa kobuso. Iprosesa yinto ayizukuthandwa ngumntu wonke, kodwa iyanceda ukugcina ixabiso lefowuni liphantsi kakhulu, eyinto ebalulekileyo kweli candelo lentengiso.
Iikhamera zilunge ngakumbi ngokuthelekiswa nezinye iimodeli ezikolu luhlu luphantsi. Ikhamera engasemva eyi-13 MP isetyenzisiwe, ngelixa engaphambili iyi-8 MP. Kwisivamisi esingaphambili sinolu bungqina ebusweni, njengoko sele kukhankanyiwe. Ibhetri yefowuni ayisiyiyo enkulu, nangona umgaqo kufuneka unike isixhobo ukuzimela okuhle. Ukongeza, kufuneka kuthathelwe ingqalelo oko iza ngoku ngePie ye-Android. Yintoni enceda ulawulo lwebhetri olungcono, kunye nemisebenzi eliqela malunga noku. Isebenza kakuhle kule nto.
I-Honor 8A sele ifumaneka kwiphepha lehlabathi lophawu lwaseTshayina. Nangona okwangoku inokuthengwa kwiimarike ezithile ezithile, ezinje ngeGrisi, iMexico, i-Indonesia okanye iRiphabhlikhi yaseCzech. Nangona kulindeleke ukuba kungekudala izakuphehlelelwa nakumazwe amatsha. Kuba siyayibona nakwiwebhusayithi yehlabathi yohlobo lophawu. Kodwa inkampani ayikakhuphi iinkcukacha ukuza kuthi ga ngoku.
Ifowuni ikhutshwa ngemibala emine eyahlukeneyo: luhlaza, bomvu, mnyama, negolide. Ukongeza, sifumana iinguqulelo ezimbini ngokwe-RAM kunye nokugcinwa, eziyi-2/32 GB kunye ne-3/64 GB. Okwangoku siyazi kuphela ukuba ifowuni isungulwe nge Ixabiso le-euro ezingama-150 kwezi marike zokuqala.
Imbeko 20 Lite: I-smartphone entsha kraca
Ke sinethemba lokwazi ngokukhawuleza. ekusungulweni kwale Honor 8A. Ukuhlaziywa kweshumi elinambini lesiphelo esisezantsi sophawu lwesiTshayina. Ucinga ntoni ngomnxeba?
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » Huawei » Imbeko 8A: Inqanaba elitsha lomnxeba lokungena
IVivo Z3X: Uluhlu oluphakathi kwinqanaba elitsha kraca
I-Spotify sele ine-100 yezigidi zababhalisi abasasazeke kwihlabathi liphela